Excel 2007 မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ပါ . ဦးဇော်လင်းရေးပေးထားတာပါ . အဝေးရောက် မြန်မာများ ဖတ်ချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
Book 1 >> Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload